Abantu Abatyeleleyo Nokukhenketha: Iofisi YamaNgqina KaYehova EMerika
Siyakumema ukuba uze kubona iiofisi noomatshini bethu bokuprinta. Fumana iadresi namaxesha okukhenketha.
Khetha Indawo Brazil E-Ecuador E-Ethiopia EAlbania EAngola EArgentina EArmenia EBarbados EBelgium EBenin EBolivia EBritani EBulgaria EBurundi ECameroon ECentral African Republic EChile EColombia ECôte d’Ivoire ECroatia ECuba EDenmark EFiji EFinland EFransi EGeorgia EGhana EGrisi EGuam EHaiti EHong Kong EHungary EIndiya EIndonesia EItaly EJamani EJapan EKazakhstan EKenya EKhanada EKorea EKyrgyzstan ELiberia EMacedonia EMadagascar EMalawi EMerika EMexico EMoldova EMozambique EMyanmar EMzantsi Afrika ENetherlands ENigeria EOstreliya EPapua New Guinea EParaguay EPeru EPoland EPortugal ERomania ERwanda ESenegal ESerbia ESierra Leone ESlovakia ESlovenia ESolomon Islands ESpain ESri Lanka ESuriname ETahiti ETaiwan EThailand ETrinidad and Tobago EUganda EUkraine EVenezuela EZambia EZimbabwe IDominican Republic KwiDemocratic Republic of the Congo KwiiPhilippines New Caledonia
Yenza Amalungiselelo Okutyelela
Ngaba ufanele ufake isicelo sokukhenketha ngaphambi kokuba ukhenkethe? Ewe. Ukuze kuphetshwe ukugcwala kwabantu nokuze bonke abakhenkethayo babone zonke iindawo, kubalulekile ukuba bonke abakhenkethela ePatterson, eWallkill, okanye eWarwick bafake isicelo sokukhenketha kusengaphambili, kungakhathaliseki inani leqela. Sebenzisa ezi linki zingezantsi ukuze ufake isicelo sokukhenketha salo ndawo nifuna ukuya kuyo.
Ukuba awusifakanga isicelo, ungakwazi ukukhenketha? Ukuba awusifakanga isicelo sokukhenketha kunganzima ukuba ukhenkethe. Ngenxa yendlela ezakhiwe ngayo iimyuziyam zaseWarwick, ngabantu abambalwa abafanele bakhenkethe kuzo suku ngalunye.
Liliphi ixesha eninokufika ngalo xa nizokukhenketha? Sicebisa ukuba nifike kwangethuba kangangeyure ngaphambi kokuba kuqalise ukukhenketha kwenu. Oku kuza kubangela ukuba iimoto zingaxinani kwindawo yokumisa iimoto nakwigumbi lokwamkela iindwendwe.
Zingaphi izakhiwo eninokuzibuka ngosuku? Zimbini kuphela
Amaqela Angaphantsi Kwe-20
Phawula: Xa ukhetha indawo ofuna ukuya kuyo ngezantsi. Uza kuthunyelwa kumntu oza kusiqwalasela isicelo sakho. Nceda ungazihoyi iindawo ezithi, “hlawula,” “itotal,” okanye “iirhafu nezinye izinto ezibhatalwayo.” Akukho nto uyihlawulayo ngokwenza amalungiselelo okuya kukhenketha. Xa ufake isicelo sokuya kukhenketha, inkcazelo engakumbi ngendlela onokuqhagamshelana nathi ngayo iza kuthunyelwa kwiofisi ofuna ukuyityelela yaseMerika ukuze iyihlole. Sizigcina ziyimfihlo zonke iinkcukacha zomntu.
Yenza Amalungiselelo Okuya Kukhenketha EPatterson
Yenza Amalungiselelo Okukhenketha EWallkill
Yenza Amalungiselelo Okukhenketha EWarwick
Iqela Elinabantu Abayi-20 Okanye Ngaphezulu
Faka isicelo sokukhenketha kwizakhiwo zethu ePatterson, eWallkill naseWarwick njengeqela kwi-intanethi.
Faka isicelo sokukhenketha kweqela elinabantu abayi-20 okanye ngaphezulu
Ukurhoxisa Isicelo Sokukhenketha
Sebenzisa ifomu ekwi-intanethi ukuze urhoxise isicelo sokukhenketha njengeqela.
EWarwick kuza kutyelelwa ukususela ngoMvulo, ngoAprili 3, 2017. Nceda ufake isicelo sokukhenketha kwi-intanethi ngaphambi kokuba wenze amalungiselelo okukhenketha.
Ukususela NgoMvulo Ukuya Kutsho NgoLwesihlanu
Ukususela ngo-8:00 kusasa ukuya kutsho ngo-4:00 emva kwemini
Ukususela ngo-8:00 kusasa ukuya kutsho ngo-11:00 emva kwemini. nango-1:00 emva kwemini ukuya kutsho ngo-4:00 emva kwemini.
Kuthatha imizuzu eyi-20
IBhayibhile Negama LikaThixo Lo mboniso ubonisa iiBhayibhile ezinqabileyo nendlela igama likaThixo eligcinwe ngayo eBhayibhileni phezu kwayo nje imigudu yokuzama ukulisusa. Lo mboniso ukwaquka nemifanekiso ejikelezayo yezinye iiBhayibhile ezinqabileyo.
Abantu Begama LikaThixo. Lo mboniso ubonisa abantu imifanekiso yembali, ilifa LamaNgqina KaYehova. Le mifanekiso nengxelo yomntu wokuqala ibonisa indlela uYehova ebebakhokela, ebafundisa nendlela abalungelelanise ngayo abantu bakhe kule minyaka idlulileyo, ukuze benze ukuthanda kwakhe.
Ikomkhulu Lehlabathi​—Ukholo Olunemisebenzi. Lo mboniso ubonisa umsebenzi weekomiti zeQumrhu Elilawulayo nendlela eliwanceda ngayo AmaNgqina kaYehova ukuba ahlanganisane, afundise abantu aze athandane.
Olu khenketho lwemizuzu lukubonisa imisebenzi eyenziwa KwiiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi neWarwick.
Nceda ufake isicelo sokukhenketha kwi-intanethi ngaphambi kokuba wenze amalungiselelo okuza.
Ukususela ngo-8:00 kusasa ukuya kutsho ngo-11:00 kusasa nango-1:00 emva kwemini ukuya kutsho ngo-4:00 emva kwemini
Kuthatha iiyure ezimbini
Lenza imifanekiso ekwiincwadi zethu nezinto ezirekhodiweyo. Xa kukhenkethwa kuthethwa ngezikolo eziqhutywa apha.
Nceda ufake isicelo sokukhenketh kwi-intanethi ngaphambi kokuba wenze amalungiselelo okukhenketha.
NgoMvulo Ukuya Kutsho NgoLwesihlanu
Ngo-8:00 ukuya kutsho ngo-11:00 kusasa nango-1:00 ukuya kutsho ngo-4:00 emva kwemini.
Kuprintwa iincwadi zeBhayibhile ezingaphezu kwezigidi eziyi-25 nyaka ngamnye. Kuthunyelwa iincwadi ngeelwimi ezingaphezu eziyi-360 kumasebe asehlabathini lonke nakumabandla amaNgqina kaYehova aseMerika, eKhanada naseCaribbean angaphezu kwayi-15 000.
Dawunlowuda Incwadi Yokukhenketha
IiOfisi Nokukhenketha: EMerika